Galaxy S11 wuxuu yeelan doonaa baytariyaal ka waaweyn | Androidsis
Samsung waxay isu diyaarineysaa soo bandhigida bisha Febraayo ee Galaxy S11. Dhamaadka-dhamaadka-sare ee summaddu waxay ballan-qaadaysaa inay la imaaneyso isbeddelo badan, gaar ahaan kamaradooda. In kasta oo aysan iyagu noqon doonin isbadalada kaliya ee aan ka helno taleefoonadan kaladuwan, maxaa yeelay baytariyadooda ayaa sidoo kale hagaagi doonta marka loo eego kuwa jiilka hadda ee taleefannada shirkadda.
Batariyaal ka waaweyn ayaa loo isticmaali doonaa Galaxy S11-kan. Tani waa uguyaraan macluumaadka soo socda ee ku saleysan daadinta cusub ee ku saabsan dhamaadka sare ee xigta ee Samsung. Muuqaal shaki la'aan muhiim ah, gaar ahaan xagga sare ee kaladuwan sida qoyskan taleefannada.
Waqtigaan la joogo waa warar xan ah, oo saameynaya laba ka mid ah moodooyinka noocyadan. Dhinac, Galaxy S11 wuxuu lahaan lahaa batari 4.300 mAh ah Awood, awood isku mid ah oo aan ka helno batariga Galaxy Note 10 +. Waxay u tahay boodbood muhiim ah taleefankan, sidaa darteed.
Qaabka kale ee ay horeyba u haysteen xog ku filan, illaa inta batteriga laga hadlayo, waa Galaxy S11e. Nooca Kuuriya ayaa mar kale naga tagi doona qaabkan xoogaa ka jaban. Batarigaagu sidoo kale wuxuu qaadanayaa boodboodi la arki karo, ka socda hadda 3.100 Mah si ay u gaarto 4.000 mAh. Madax-bannaani badan, sidaa darteed.
Iyagu waa horumar muhiim ah oo la xiriira arrimaha batteriga, kuwaas oo noocyada Samsung Galaxy S11 ay ballanqaadayaan inay bixiyaan. Labada xaaladood, labadan moodal, waxaan ka helaynaa batari ka weynaan doona 900 Mah. Marka tani waa wax ay tahay in si cad loo ogaado isticmaalka aaladda maalin kasta.
Iyagu waa xanta xilligan, oo Samsung aysan xaqiijin mana dafirin. In kasta oo ay yihiin xog ka timid dhowr miirayaal muhiim ah, markaa waa inaan xisaabta ku darsanaa. Intaas waxaa sii dheer, waxay naga caawinayaan inaan fikrad ka helno waxa laga filan karo Galaxy S11.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Galaxy S11 wuxuu la imaan doonaa baytariyaal waaweyn